Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac ọrụ na onye chọrọ ike Hollywood-ịke DVD iji gị onwe gị photos, fim na music, iDVD bụ gị mma nzọ dị ka ọ na-abịa na a usu ngwaọrụ ka ị na-eme na-adị mfe. The akụkụ kasị mma bụ na DVD kere otú a, ya bụ, iji iDVD, nwere ike na-egwuri na ọtụtụ nke DVD Player ị ga-ahụ taa, tinyere ndị dị iche iche DVD draịva na kọmputa. Ya mere, na-ekere òkè gị pụrụ iche n'oge na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ na-aghọ ọbụna mfe.
Ọzọ ojiji nke na-ere ọkụ a DVD nke gị onwe gị na iji iDVD bụ na ị nwere ike mgbe ahụ iji ndị a nile di iche iche nke n'ihu, ngosipụta ụlọ ndò, ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ị ga-adị mkpa na video na-egwuri na a akaghị. iDVD nwere ogologo ndepụta atụmatụ ma ọ bụ ngwá ọrụ ndị ị pụrụ iji nye gị arụrụ n'ụlọ DVD na ọkachamara obi na-adị. Were a lee anya na ọtụtụ ihe ndị na ị pụrụ ime na iDVD dị ka e n'okpuru.
Mwube nke ngbanwe àgwà
Nhọrọ nke a isiokwu gị DVD
Edezi menu aha
Agbakwụnye ngosi mmịfe
Agbakwụnye mgbanwe n'etiti oyiyi
Agbakwụnye a soundtrack nke gị nhọrọ
Tinye media iji dobe Ikpehe
Tinye menu ederede na-agbanwe ọdịdị ya
Ịgbanwe ọdịdị buttons gụnyere size, ederede, na udi
Tinye ikwu n'ụzọ na-buttons
Taa, anyị na-aga a ngwa ngwa anya na otú ọkụ a nkiri ka a DVD iji iDVD na ya mfe ụdị. Eso ndị a na ị ga-adị mfe-enwe ike nweta a oké àgwà DVD ma na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ menu isiokwu na ị nwere ike ahụ na-enwe.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori iDVD
Ihe mbụ na--mere bụ ẹkedori iDVD. Bụrụ na ọ bụghị arụnyere ugbua, ị pụrụ ọbụna ibudata ngwa site na ịpị a njikọ wee wụnye ya na kọmputa gị. Ozugbo mere, ị ga-ahụ akara ngosi maka iDVD dị ka e n'okpuru. Nanị pịa na ya na-emeghe ngwa.
Mgbe ulo oru ngwa kwesịrị imeghe elu dị ka e gosiri ndị na-esonụ screenshot. Ị ga-ahụ ụyọkọ nhọrọ na egosipute na isi n'ọdụ ụgbọ mmiri na a oke nwere ike dabere na ụdị oru ngo na ị na-arụ ọrụ na.
Ọ bụrụ na ọ bụ echiche ọhụrụ na ị na-arụ ọrụ na, pịa 'Mepụta ọhụrụ oru ngo'.
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-arụ ọrụ na na aghaghị na-ezumike n'etiti, wee pịa na 'Mepee dịbunụ otu'.
Ọ bụrụ na oru ngo-ajụ maka ihe ala obi na-adị, mgbe ahụ, pịa 'Ime Anwansi iDVD'. Nke a bụ a fun mma ka ọ na-eme ihe niile bụ isi ọrụ n'ihi na ị ka ị na-a n'oche azụ na nanị zuru ike.
Na ndị ikpeazụ na otu onye bụ, 'OneStep DVD' na n'ezie na-ahapụ gị ike ọrụ gị jidesie a diski.
Mara - E nwekwara otu nhọrọ nke a Video Tutorial ga-enyere gị na-enweta ụfọdụ na ụkpụrụ nduzi na otú iji iDVD. Ma ọ bụrụ na ọ bụla e nyere mgbe ị na-ekpebi bụghị ịnọgide ọzọ ị nwere ike mgbe niile see 'Kwụsị' button na ị na-esi ka mma.
Nzọụkwụ 2: Họrọ 'OneStep DVD'
Ugbu a, gaa na nhọrọ File> 'OneStep DVD si Movie ...' site File menu.
Nzọụkwụ 3: Họrọ video
Ọ bụ oge na họrọ video ị ga-achọ-erekwa ọkụ DVD na mgbe ahụ ozugbo i mere gị nhọrọ, pịa nhọrọ nke 'Import'. Dabere na ụdị oru ngo na ị na-arụ ọrụ na, ị pụrụ ikpebi iji họrọ nanị otu faịlụ maka ibubata ma ọ bụ ọbụna ndị ọzọ. Iji họrọ multiple faịlụ, nanị pịa akara button mgbe eme selections. I nwekwara ike iji Nchikota akụ buttons (Up na Down) ọnụ na nketa nke Mgbanwe bọtịnụ. Ozugbo, faịlụ e họrọ dị ka mkpa, gaba n'ihu site na ịpị Import bọtịnụ.
Nzọụkwụ 4: Fanye DVD
Ọ bụrụ na site ugbu a, ị na-adịghị ama ịtinye a recordable ma ọ bụ ide DVD maka ihe nkiri na-nsure, iDVD ga-ajụ gị ka ị na fanye ya mere na họrọ faịlụ nwere ike nsure ma ọ bụ dere. Ya mere, na-aga n'ihu ma na-eme ya.
Nzọụkwụ 5: Nọdụ azụ ma zuru ike
Ka anya dị ka i ịtinye a recordable DVD, iDVD ga-aga n'ihu na-eme ndị needful. Ngwa ga-akwadebe DVD-akpaghị aka, usoro ihe nkiri na ị chọrọ nsure na na DVD, na n'ikpeazụ ọkụ ya dị ka ọ dị mkpa ka mezue usoro. Niile mere na ya, nke mere na ị pụrụ nanị-na na na-enwe mmasị ikiri usoro imecha quicker.
Ozugbo usoro okokụre, iDVD ga-akwado ya unu dị ka e gosiri screenshot n'okpuru. Pịa na Emela na DVD bụ njikere na nkiri nsure na ya n'ihi na ị na-elele na ihe ọ bụla kọmputa ma ọ bụ DVD Player. Ugbu a, ị nwere ike ịga n'ihu na-enwe na-ekere òkè gị ọhụrụ nsure nkiri na ihe ọ bụla nke ndị enyi gị na ndị òtù ezinụlọ.
> Resource> DVD> Olee otú iji ọkụ na-iDVD enweghị menu / isiokwu